Al-Qaaciddada Waqooyiga Afrika waxay magacowday hoggaamiye cusub oo beddela Droukdel – AfmoNews
Al-Qaaciddada Waqooyiga Afrika waxay magacowday hoggaamiye cusub oo beddela Droukdel
Al-Qaacidada Maqribul Islaam (AQIM) ayaa dooratay hoggaamiye cusub oo beddelaya Cabdelmalek Droukdel, oo ay dileen ciidammada Faransiiska bishii Juun, kooxda dabagalka ee SITE ayaa werisay Sabtidii.
Algerian Abu Obaida Yusuf al-Annabi, oo ah madaxa Golaha sharafta leh ee AQIM, ayaa loo magacaabay bedelka Droukdel, SITE ayaa sidaas tidhi.
Al-Annabi wuxuu ku jiray liiska madow ee Mareykanka “argagixisada caalamiga ah” tan iyo bishii Sebtember 2015, sida lagu sheegay Mashruuca Ka-hortagga Xag-jirnimada.
Wuxuu si joogto ah uga dhex muuqday muuqaalada borobagaandada kooxda isagoo sanadkii 2013 si caan ah u dalbaday in Muslimiinta ay ka aargutaan faragalinta Faransiiska ee Mali.
AQIM waxay sidoo kale xaqiijisay geerida muwaadinad u dhalatay Switzerland Beatrice Stoeckli, oo laga afduubay Timbuktu iyadoo adeegaya adeegayaal sanadkii 2016.
Waxay ku eedeysay inay u dhimatay isku day ay “saliibiyiinta Faransiiska” ku doonayeen inay ku sii daayaan.
Al-Qaacidada Maqribul Islaami waxay ka timid koox ay bilaabeen dhammaadkii 1990-yadii Islaamiyiin xagjir ah oo Aljeeriyaan ah, kuwaasoo 2007 ballan qaaday inay daacad u yihiin shabakadda Al-Qaacida ee Osama Bin Laden.
Kooxda ayaa sheegatay mas’uuliyadda weeraro badan oo lala beegsaday ciidamada iyo dadka rayidka ah ee ku nool dhammaan gobolka Saaxil, oo ay ku jiraan weerarkii 2016 lagu qaaday hoteel gaar ah iyo maqaayad ku taal Burkina Faso oo ay ku dhinteen 30 qof oo u badan reer galbeed.
Faransiiska waxaa ka jooga in ka badan 5,000 oo askari oo la geeyay xooggaga ka soo horjeeda jihaadka ee Barkhane ee ku sugan gobolka Saaxil.